GPS Tracker Factory - Mpanamboatra GPS Tracker China, mpamatsy
Ity modely ity dia maotina ho an'ny fiara miaraka amin'ny OBD interface tsara ho an'ny fiara. Izy io dia mampiasa teknolojia avo lenta GPS sy AGPS, ny fotoana tena izy dia manome toerana marina sy haingana kokoa. Fametrahana maimaimpoana, ampidiro amin'ny interface interface OBD, tsy mila manimba ny tsipika fiara voalohany. Mampitandrina izany rehefa mivoaka ny faritra geo-fefy.
Toy izany koa, ity maodely ity dia misy fampiasa sasany mahasoa, fanairana haingam-pandeha, alarobia herinaratra ambany, fanairana fanairana, fidirana / fivoahana ny fanairana Geo-fefy, fanairana hovitrovitra, fanairana fanoherana ny fandravana, fanairana fanoherana fifandonana, fitsitsiana herinaratra sy vidin'ny GPRS, fametrahana fahazoan-dàlana 5 nomeraon-telefaona. Mpanampy tsara amin'ny fikarakarana ny fiara.
Ity modely GPS smart tracker ity dia natao manokana ho an'ny fiara, fiara, moto, motera elektrika, ebike, scooter, fiara mahay mandanjalanja sns .. Miasa mifototra amin'ny GPS teknolojia + AGPS, tena haingana sy tena izy ny toerana tena izy, manohitra halatra. Izy io dia manana fiasan'ny geo-fefy, hanaitra mandritra ny ivelan'ny faritra misy azy.
Ary ity maodely ity dia misy tombony vitsivitsy, fanairana haingam-pandeha, alarobia herinaratra ambany, fanairana fihetsiketsehana, fidirana / fivoahana ny fanairana Geo-fefy, fanairana hovitrovitra, fanairana fanoherana ny fandravana, fanairana fanoherana fifandonana, fitsitsiana angovo sy vidin'ny GPRS. Ary koa ny asan-tsafidy sasany, fanapahana herinaratra fanapahana, ACC detection ary mampahafantatra, menaka fanaraha-maso lavitra sy ny faritra, fiara fijanonana.
Ity modely GPS mahay modely ity dia natao indrindra ho an'ny fiara misy interface OBD, tohanan'ny teknolojia GPS + AGPS izy io, afaka haingana be sy mamantatra tsara an'io toerana io eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izy io dia manana fiasan'ny geo-fefy, hanaitra mandritra ny ivelan'ny faritra misy azy. Mpanampy lehibe amin'ny fikarakarana fiara.
Ary ity maodely ity dia misy tombony vitsivitsy, fanairana haingana, fanairana fihetsiketsehana, fidirana / fivoahana ny fanairana Geo-fefy, fanairana hovitrovitra, fanairana fanoherana ny fandravana, fanairana fanoherana fifandonana, fitsitsiana herinaratra sy vidin'ny GPRS.
Ity modely GPS mahay modely ity dia indrindra ho an'ny fiara misy interface OBD, ho an'ny kamio, bus, fiara, moto. Izy io dia tohanan'ny teknolojia GPS + AGPS, afaka haingana be sy mamantatra tsara ny toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy io. Izy io dia manana fiasan'ny geo-fefy, hanaitra mandritra ny ivelan'ny faritra misy azy. Mpanampy lehibe amin'ny fikarakarana fiara.
Ary ity maodely ity dia misy tombony vitsivitsy, fanairana haingana, fanairana fihetsiketsehana, fidirana / fivoahana ny fanairana Geo-fefy, fanairana hovitrovitra, fanairana fanoherana ny fandravana, fanairana fanoherana fifandonana, fitsitsiana herinaratra sy vidin'ny GPRS, fametrahana laharana finday fahazoan-dàlana 5. Misy ihany koa ny asan'ny safidy, ny detection ACC ary ampahafantaro, ny alàlan'ny herinaratra fanapahana, ny solika fanaraha-maso lavitra ary ny fizaran-tany, ny fitadiavana ny fanjifana solika, ny haavon'ny herinaratra ary ny volt （tsy voatery 5 PIN), ny fahitana ny mari-pana amin'ny rivotra mandeha sy ny eny ivelany. Mpanampy tsara amin'ny fitazonana fiara.
Ity modely GPS smart tracker ity dia mifototra amin'ny teknolojia GPS + AGPS, afaka haingana be sy mamantatra tsara ny toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy io. Mety amin'ny fiara, zokiolona, ​​zaza, alika, luggages sns .. Misy fiasa geo-fefy io, hampitandrina mandritra ny toerana tsy misy azy.
Miaraka amin'ny bateria lehibe indrindra izy io ary mety hijanona mandritra ny 4 volana. Miaraka amin'ny fiasa mahery vaika mahery vaika izy io, afaka miditra anaty rano, koa aza misy rano sy orana ahiahy raha ampiharina amin'ny fiara sy alika.
Ary ity maodely ity dia misy tombony vitsivitsy, fanairana haingam-pandeha, alarobia herinaratra ambany, fanairana fihetsiketsehana, fidirana / fivoahana ny fanairana Geo-fefy, fanairana hovitrovitra, fanairana fanoherana ny fandravana, fanairana fanoherana fifandonana, fitsitsiana angovo sy vidin'ny GPRS. Mpanampy tsara amin'ny fanoherana ny faharesena izy io.
Ity modely GPS smart tracker ity dia tohanan'ny tekinika GPS + AGPS, mihetsika haingana sy marina tokoa izy io. Mety amin'ny fiara, zokiolona, ​​zaza, alika, luggages sns .. Azo alaina amin'ny fefy geo-fefy sy fampandrenesana izy io rehefa any ivelan'ny faritra misy azy.
Miaraka amin'ny fotoam-piambenana 12 andro ary miaraka amin'ny tombony marobe, fanairana haingana, fanairana mahery kely, fanairana fihetsiketsehana, fidirana / fivoahana ny fanairana Geo-fefy, fampandrenesana hovitrovitra, fanairana fanoherana ny fandravana, fanairana fanoherana, fitsitsiana herinaratra ary vidin'ny GPRS. Mpanampy tsara amin'ny fanoherana ny faharesena izy io. Ary miaraka amina fiasa mahery vaika mahery vaika izy io, afaka miditra anaty rano, koa aza misy rano sy orana ahiahy raha ampiasaina amin'ny fiara sy alika.
GPS Tracker / Zokiolona / GT-E01
Ity modely smart tracker ity dia indrindra ho an'ny fahanterana, ny lafiny feno dia manara-maso ny toerana misy ny antitra sy ny toe-pahasalamany. Mety ho lavitra be izany, aza matahotra fa tsy ao amin'ny tanàna iray ianao. Miorina amin'ny teknolojia marobe amin'ny toerana, GPS + WIFI + LBS, ary suite ho an'izao tontolo izao.
Voafetra ho an'ny mpikambana fifandraisana an-tariby 15 ny fehin-tànana, ny nomeraon-telefaona voarakitra ihany no afaka miantso fifandraisana an-tariby sy hafatra am-peo, manakana ny olana mety hitranga sy ny olana ara-piarovana io. Izy io dia afaka mametraka fefy elektrika ho an'ny faritra azo antoka, hanaitra raha tsy ao anaty fefy.
Izy io dia afaka manara-maso ny tosidra, ny tahan'ny fo, ny fotoana rehetra mifehy ny toe-pahasalamana. Mpanampy lehibe hanaraha-maso ireo havana antitra izy io.
GPS Tracker / Zokiolona / GT-E02
Ity maodely marani-tsaina 4G ity dia manolotra ny toerany, ny fanaraha-maso ny fahasalamana ary ny fiantsoana an-tariby / antso an-tariby, fiarovana ny lafy feno ho an'ireo havana efa antitra.
Ho an'ny fametrahana azy dia mirefy 20m ny halavany. Izy io dia azo apetraka fefy elektrika, ary hanaitra raha ivelan'ny faritry ny fefy.
Ho an'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny tosidra, fanaraha-maso ny oksizena amin'ny rà, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny vatana ary fanaraha-maso ny tahan'ny fo. Afaka mahazo ny angon-drakitra momba ny fahasalamana ho an'ny anti-panahy amin'ny fotoana rehetra. Ary manolotra fanairana manohitra ny fianjerana, SOS lakile iray fanampiana, fanairana tsy ara-pahasalamana. Omeo ihany koa ny fampahatsiahivana mipetrapetraka sy ireo fiasa manisa ireo dingana hampahatsiahy ny fiainana ara-pahasalamana.
Ho an'ny antso an-tariby na antso an-tsary dia voafetra amin'ny lisitry ny laharana voarakitra, manakana ny sahirana ary azo antoka. Tsy hatahotra ny olona iray noho ny fanampian'ity tracker maranitra ity ho an'ireo loholona.
GPS Tracker / Zokiolona / GT-E03
Ity maodely ity dia Tracker marani-tsaina natao ho an'ny zokiolona, ​​miaro ny fahasalamany sy ny fiarovana azy ireo. Izy io dia miasa araka ny hamaritana tsara ny toerana, toerana misy fefy elektrika ho an'ny faritra azo antoka, fampandrenesana latsaka, fanaraha-maso ny tosidra, fanaraha-maso ny tahan'ny fo, SOS lakile iray ho fanampiana sns.
Ny tamba-jotra 4G dia mahatonga azy io hifandray am-peo matanjaka. Ny fifandraisana amin'ny hafatra am-peo, antso an-tsary ary antso an-tariby dia ao anatin'ny vondrona misy fifandraisana APP ny lisitra isa voarakitra, manelingelina ary azo antoka amin'ny fahanterana.
Ny zokiny dia afaka mitafy famantaranandro foana na dia manao raharaha ao an-trano aza izy io, tsy tantera-drano IP67, raha tsy manimba ny akorany, dia tsy hisy vokany ratsy eo amin'ilay vokatra ilay fitaovana raha latsaka anaty rano latsaky ny 1M lalina izy io ary lena ao anaty 30 minitra.
GPS Tracker / Zokiolona / GT-E04
Ity modely smart tracker ity dia manana safidy 3 loko, natao ho an'ny loholona, ​​bokotra lehibe misy braille, azo ampiasaina ho an'ny blindman. Ny lahasa lehibe indrindra amin'ny famantaranandro marani-tsaina dia ny fametrahana ny toerana misy sy ny fifandraisana an-tariby.
Izy io dia afaka manara-maso ny tosidra, ny tahan'ny fo ary ny maripanan'ny vatana, amin'ny fotoana rehetra dia mifehy ny toe-pahasalamana. Fampandrenesana mianjera, ivelan'ny fanairana fefy herinaratra, tadiavo ny toerana misy ny antso lehibe iray SOS, mpanampy lehibe izy io amin'ny fanaraha-maso ny toe-pahasalamana sy ny fiarovana ny fahanterana.
Ny bracelet dia nametraka mpikambana ao anaty lisitra fotsy, ny laharana finday voarakitra ihany no afaka miantso ny fifandraisana an-tariby sy ny hafatra am-peo, manakana ny olana mety hitranga sy ny olana ara-piarovana io. Ny mpampiasa APP dia afaka manara-maso ny zokiny.
GPS Tracker / Zokiolona / GT-E05
Ity dia modely tsara natao ho an'ny zokiolona, ​​mpanampy lehibe indrindra amin'ny fanaraha-maso ny toerana misy azy ireo ara-pahasalamana sy azo antoka. Ny fiasan'ny toerany dia mifototra amin'ny teknolojia marobe amin'ny toerana, GPS + WIFI + LBS, ary efitrano ho an'izao tontolo izao. Mety ho fanaraha-maso lavitra, aza manahy fa tsy eo amin'ny tanàna iray ianao. Ary raha vantany vao tafavoaka ny fefy elektrika ny loholona, ​​dia hiasa ny fanairana.
Ho an'ny fahasalamana, ny fotoana rehetra dia manara-maso ny tosidra, ny oxygen oxygen, ny tahan'ny fo ary ny hafanan'ny vatana. Hampahafantatra izany amin'ny 1st fotoana raha tsy salama ny fahasalamana.
Ho an'ny serasera, ny fifandraisana voafetra ihany no voafetra ao anatin'ny lisitra fotsy voarakitra mpikambana, ary ny fifandraisana amin'ny feo ao anatin'ny vondrona misy ifandraisany amin'ny APP, ialao ny olana mety hitranga sy ny olana azo antoka.
GPS Tracker / Zokiolona / GT-E06
Ity modely ity dia Tracker marani-tsaina natao ho an'ny be antitra fa manana endrika mavitrika. Izy io dia afaka manampy amin'ny fametrahana ny be antitra, ary hanara-maso ny fahasalaman'izy ireo, ary azo ampiasaina ho toy ny finday.
Miorina amin'ny teknolojia misy ny GPS + WIFI + LBS + AGPS, ary ny efitrano fiomanana ho an'izao tontolo izao, dia afaka mamantatra tsara ireo antitra ao anatin'ny 20m eo am-baravarana sy 200m ivelan'ny trano, fefy elektrika maro no miasa mba hahazoana antoka fa ireo zokiolona ao anatin'ny toerana azo antoka. Izy io dia manara-maso ny tsindry ra, manara-maso ny tahan'ny fo sy ny oxygen oxygen, izay tsy mahazatra azonao raisina ny hafatra amin'ny voalohany ary manao réaction.
Finday marani-tsaina koa izany, antso an-tsary, firesahana amin'ny feo, antso an-tarobia. Miaraka amin'ny ringtone, aza manahy fa tsy henon'ny zokiolona ny antsonao. Miaraka amin'ny fiantsoana vonjimaika ho an'ny SOS izany. Ary ny mpanara-maso tsy misy rano sy orana ahiahy, tsy misy rano amin'ny IP67 izy io, afaka mitafy azy io rehefa miasa ao an-trano, ary afaka mitafy azy aza rehefa milomano.
Mitombo ny avotra, Jiro zavamaniry, Mitombo Lightin, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mitombo Ligh, Mamboly hazavana,